Hariiroo Itiyoo-Ertiraa biyyoonni guddatan attamiin ilaalu? - BBC News Afaan Oromoo
Ameerikaan tarkaanfii Itoophiyaafi Ertiraan wal-dhabdee yeroo dheeraaf giddu isaanii ture furuun gara hariiroo gaarii waliin uumuutti hojachuuf jalqaban akka ishee jajjabesse ibsite.
Ibsa 'Press Secretary' biyyattii baaseen, dhimmuma kanarratti baase akka agarsiisutti, waraanni biyyoota lamaan gidduutti uumamee ture waggoottan 20'n darban keessa nagaafi guddinni dinagdee naannichaaf barbaachisaa ta'e Galaana Diimaa dhaquu hin dandeenye.
Nageenyi waara'aa ta'e argamuun badhaadhinaafi nageenya lammillee biyyoota lamaanii qofaaf osoo hin taane biyyoota ollaa isaanii kan Ameerikaafi kan addunyaatiif bu'aa buusa jedha ibsichi.
Ameerikaan ibsa Itoophiyaan gaafa Waxabajji 5, 2018 akka waliigaltee Aljersi kana bara 2000 mallatteeffame haala haaromsa siyaasaafi dinagdee biyyaa fudhachaa jirtu keessatti beeksifte ni dinqisiifatti.
Akkasumas, murannoo pirezidaantiin Ertiraa gaafa Tarkaanfii Itoophiyaafi Ertiraan nagaa buusuun hariiroo gaarii gara fuula duraatti tolfachuuf jedhan Ameerikaafi Gamtaan Awurooppaa akka deeggaran ibsaniiru.
Waxabajji 20, 2018 adeemsa nagaa gara fuula duraatti tarkaanfachiisuuf jila tokko gara Finfinneetti erguuf beeksises ni deggerti.
Ministirri Muummee Abiy Ahimadiifi Pirezedaanti Isaayaas Afa-warqii nagaan akka dhufuuf gaggeessummaaa murannoo qabu akkasii fudhachuu isaanii agarsiisaniiru.
Itoophiyaafi Ertiraan tasgabbiifi badhaadhinni Gaanfa Afirikaatti akka uumamu gochuu keessatti ga'ee cimaa qabu. Gama biraatiinis Gamtaan Awurooppaa tarkaanfii Itoophiyaafi Ertiraan fudhachuutti jiran kan deggeramu ta'uu ibseera.
Ibsa Bakka buutuu Ol-aantuufi Pirezedaantii Itti Aantuu Gamtaa Aurooppaa Federikaa Mogeeriin walitti dhufeenya Itoophiyaafi Ertiraa irraatti.
Ejjennoon Itoophiyaan dhiyeenya kana waliigaltee Aljeersii fi murtee komishinii daangaa Itoophiyaa fi Ertiraa guutummaatti hojiirra oolchuuf beeksifte.
Kanatti aansuun ammoo Pirezidaantiin Eertiraa dhimmuma kanaaf jila tokko gara Finfinneetti erguuf akka jiru beeksisuun isaanii rakkoo yeroo dheeraa biyyoota lamaan gidduu tureef fala ta'a jedhan.
Rakkoon dhimmi daangaa biyyoota lamaanii gidduu jiru kun furamuun biyyoota lamaaniif akkasumas tasgabbii Gaanfa Afirkaa keessatti fiduudhaaf bu'a qabeessadha.
Ameerikaanis Gamtaan Awurooppaa adeemsa nagaa Itoophiyaafi Eertiraa gidduutti dhufu akka gargaaran ibsaniiru.